Kitapo ho an'ny mpianatra ho an'ny mpianatra lamaody TIGERNU
Fahafahana: Ity kitapom-batsy mahazatra ity dia kinova tsotra an'ny T-B3032. Ny habeny dia 28.5 * 15 * 45cm (L * W * H), mety amin'ny solosaina finday hatramin'ny 15.6 ″, efitrano roa lehibe sy paosy roa eo anoloana no manome toerana ampy ho an'ny zavatra ilainao isan'andro ary mitazona ny kitaponao ho madio sy milamina. Ny tanany laptop dia voaro tsara. Paosy harato roa no tsara ho an'ny elo sy tavoahangin-dranoo. Paosy iray miady amin'ny halatra miverina miverina tanteraka dia mety amin'ny telefaonao sy ny entana sarobidy hafa.Fitaovana: ity fitaovana kitapom-batsy ity dia tsy mahazaka finday sy horita matevina, maharitra, maharitra ary tia namana. Ny zipper lehibe dia ny zipper azo zahana roa azo fehezina TIGERNU, matevina, malama ary azo antoka kokoa ho an'ny fanananao.Endri-javatra: ity kitapom-batsy ity dia fahaiza-manao lehibe, mety amin'ny tanjona rehetra. Ny kitapom-batsy dia misy fehin-kibo nohamafisina sy fehin-tsoroka azo ovaina. mora ny kitaponao amin'ny trolley ny valizinao.
Miaraka amin'ny fijery matihanina, ny endrika mety ary ny antsipirian'ny fiarovana, ny kitapom-batsy Tigernu manana fahaiza-manao lehibe mifanaraka amin'ny fomba fiasanao.
Kitapo ho an'ny mpianatra lamaody TIGERNU
Ity haben'ny kitapom-bolan'ny sekoly ity dia 28 * 15 * 41cm na 30 * 18 * 47 (L * W * H), miaraka amin'ny efitrano iray lehibe sy fonon-tànana solosaina finday mety ho an'ny laptop hatramin'ny 15.6inch, efitrano iray eo anoloana misy poketra kely maro, lafiny roa paosy harato ho an'ny tavoahangy sy elo. Malalaka ity kitapom-batsy ity ho an'ny bokinao rehetra, kahie, telefaona, banky elektrika, tariby sns.
Izy io dia vita amin'ny polyester avo lenta ary misy loko 5 misy, mahafeno ny fepetra takiana. Ny zipper lehibe dia Tigernu patanty roa sosona azo zahana zipper roa, porofo mipoaka, mateza ary azo antoka. Kitapo miady amin'ny halatra, manome fiarovana fanampiny ho an'ny ny fiainanao isan'andro.
Ity kitapom-batsy ity dia mety tsara amin'ny fotoana rehetra, sekoly, fiantsenana, fiarahana amin'ny faran'ny herinandro, asa, lalana, fitsangantsanganana fohy sns. Misafidiana kitapo Tigernu, manomboka fiaraha-miasa mandresy.
Kitapo kitapo laptop an'ny TIGERNU
Fahafahana: Ity kitapom-batsy mahazatra ity dia kinova tsotra an'ny T-B3032. Izy io koa dia manana habe roa, ny habe iray dia 29 * 14 * 44cm (L * W * H), mety ho an'ny laptop hatramin'ny 15.6 ″, ny iray hafa dia 31 * 17 * 48cm (L * W * H), mety amin'ny laptop hatramin'ny 17 ″ .Ny efitrefitra roa lehibe sy paosy roa eo anoloana dia manome toerana ampy ho an'ny zavatra ilainao isan'andro ary mitazona ny kitaponao ho madio sy milamina. Ny fanamboarana tanany solosaina finday dia milomano tsara. Paosy iray miady amin'ny halatra miverina miverina tanteraka dia mety amin'ny telefaonao sy ny entana sarobidy hafa.
Fitaovana: ity fitaovana kitapom-batsy finday ity dia volo matevina matevina sy mateza, maharitra, maharitra ary sariaka amin'ny tontolo iainana. Ny zipper lehibe dia ny zipper matevina azo zahana azo zahana TIGERNU, azo antoka, malama ary azo antoka kokoa ho an'ny fanananao.
Endri-javatra: ity kitapom-batsy ity dia fahaiza-manao lehibe, mety amin'ny tanjona rehetra. Ny kitapom-batsy dia misy fehin-kibo nohamafisina sy fehin-tsoroka azo ovaina. mora ny kitaponao amin'ny trolley ny valizinao.
TIGERNU kitapo lamaody famolavolana lehilahy vaovao
Fahafahana lehibe sy kitapom-batsy voalamina tsara: ny habeny dia 31 * 17 * 48cm (L * W * H) .Ny efitrano finday iray matevina matevina matevina mifanentana amin'ny laptop hatramin'ny 15.6 santimetatra. Efitra lehibe lehibe misy paosy anatiny 10 dia mety amin'ny takelaka, penina, telefaona, boky, akanjo; paosy manokana ho an'ny banky herinaratra. Efitra voalohany an'ny zipper aloha ho an'ny solomaso. Kitapom-bola 2 sy vata zipo iray aloha ho an'ny tavoahanginao rano, elo, kahie ary zavatra kely hafa. Ataovy milamina ny kitaponao.
Fitaovana avo lenta: kitapo fitsangatsanganana orinasa TIGERNU dia vita amin'ny Oxford, splashproof sy corch tahan mahatohitra, izay manimba sy manimba ny tontolo iainana. Ny lamba tsy miaro amin'ny rano dia mitazona ny entanao tsy ho voadinika sy milatsaka. Ny fomba roa fanokafana ny zipper Tigernu, mora idirana ary porofo mipoaka ary malefaka ampiasaina.
Seranan-tsambo USB fampitaovana ivelany: TIGERNU USB backpack amin'ny alàlan'ny tariby USB azo esorina dia manome anao fomba mety kokoa handoavana telefaona, takelaka sns.
Mahazo aina & mora: Airflow & matevina matevina sy tadiny matevina dia mamela anao hahatsapa ho mahazo aina na dia maharitra ela aza. Ny famolavolana ergonomika sy ny fehin-soroka miendrika S azo ovaina dia mifanaraka amin'ny rafitra fanenanana enta-mavesatra ergonomika, fanapahana ny soroka, ny hazondamosina, ny tsindry amin'ny lumbar. Ny fehikibo fehin-kibo efa voadidy tsara dia mety aminao raha manamboatra ny kitapo finday ao anaty trolley ny valizinao, manao ny dia sy mandeha lavitra kokoa amin'izay alehanao. Paosy 2 amin'ny fehin-tsoroka ho an'ny solomaso misy anao sy ny karatrao
Fiarovana: kitapo laptop miaraka am-paosy miafina miady amin'ny halatra ao ambadika miaro ny entanao sarobidy amin'ny mpangalatra. Ny zipper roa dia azohidiana amin'ny hidiny, noho izany dia tsy mila miahiahy mihitsy ianao hoe misy olona mangalatra ny entanao. Miambina tsara ny entanao!
Tongasoa eto amin'ny TIGERNU amin'ny fiaraha-miasa mandresy
TIGERNU tompona pasipaoro tena izy
T-S8005 no volavolan-tsika mpihinana pasipaoro voalohany, mety ho toy ny poketra koa. Ny fisafidianana ny hoditra tena izy dia avo lenta sy mahazatra. Ny habeny dia10.7 * 14.6cm, miaraka amina kara-pilalaovana 4, slot vola iray ary slot pasipaoro roa ary paosy karatra sim roa. Ampy ho an'ny pasipaoronao, karatra banky, ID, tapakila fiaramanidina, karatra SIM izany. Ny fiasan'ny RFID dia afaka miaro ny karatrao rehetra ary miaro ny mombamomba anao manokana.
Ny fitaovana dia tena hoditra, avo lenta ary maharitra. Izy io koa dia namboarina tamin'ny sary famantarana Tigernu ho endrika ary marika famantarana ihany koa.
Ny kitapom-batsy tsirairay avy dia feno boaty tsara, ka mahatonga azy io ho safidy tsara ho fanomezana ho an'ny olon-tianao. Safidy tsara izy io na amin'ny fampiasanao isan'andro na amin'ny fitsangatsanganana.
TIGERNU voalohany manana karatra mahazatra
Izy io dia mpihazona karatra miasa RFID, tsy lamaody ihany fa avo lenta ihany koa. Izy io dia vita amin'ny hoditra tena izy, mateza be ary ahazoana aina ampiasaina. Manana slot karatra 10 hitazonana ny karatrao rehetra sy paosy zipper iray mba hitahirizana ny volanao sy ny farantsanao. Miasa toy ny kitapom-batsy miaraka amin'izay.
Ny mpihazona karatra dia mpiara-miasa tsara amin'ny fiainanao isan'andro. Mavesatra maivana, vatana kely, mora entina. Ny fiasan'ny RFID manohitra ny halatra dia manome fiarovana anao bebe kokoa amin'ny fiainanao. Ny kalitaony avo lenta koa dia lasa fisongadinana ho azy manokana.
Ny vokatra Tigernu dia hanome fahafaham-po anao hatrany.
Tigernu mamorona kitapo kitapo hoditra tena izy aloha
Ity kitapom-batsy ity dia vita amin'ny volon'ondry ambony kalitao avo lenta, malefaka sy miaina. Izy io dia kitapo avo lenta, lamaody ary maharitra maharitra.
Ny endriny dia tena miavaka, miaraka amin'ny efitrano lehibe iray ary ny tampon-kavoana misy haingon-trano eo alohany. Izy io dia manana fahaiza-manao lehibe sy fiarovana amin'ny dianao isan'andro.
Kitapo kitapo tsara ho an'ny fiainanao isan'andro na fanomezana ho an'ny namanao na olon-tianao izany.